Yakanakisa Tsika Pole Mireza Kugadzira uye Fekitori | Jesson Mureza Arts & Crafts
Tsika Mireza Kubva kune Yako Artwork
Kubva pamalogo, zviratidzo zvekirabhu, crest, kunyangwe kupenda kwemwana wako ruoko, CFM inogona kushanduka ikave chero tsika mireza zvinoenderana nemutengi zvese zvinodiwa. Iyo yakashongedzwa uye yakashongedzwa fomati yetsika mireza zvinoreva kuti chinenge chero chiitiko chinogona kukwidziridzwa neaya madiki asi akanyatsogadzirwa zvigadzirwa.
CFM Inokupa Iwe Dzakawanda Sarudzo dzeCustom Yakagadzirwa Mireza
Kuti ikubatsire iwe kugadzira chaiyo tsika yakagadzirwa mireza iwe yaunoda, isu tinopa dzakasiyana siyana sarudzo. Isu tinokupa iwe yakawanda yezvinhu zvekusarudza kubva kuti zvikwanise bhajeti yako yetsika yakagadzirwa mireza uye kuti ipe kugadzikana uye hupenyu hwehupenyu hunodiwa, zvinoenderana nekuti iwe unoshandisa yako tsika yakadhindwa mireza kwenguva yakareba kwenguva, pazviitiko zvakakosha chete, zvekushandisa zvemukati chete, kana zvekushandisa kwekunze, kwavanozoratidzwa nemhepo, mvura uye nezuva.
250g Soft dzakarukwa
Yakasarudzika Tsika Pole Sleeve
Yedu tsika pole pole sleeve chishandiso chakakodzera kushandura logo yako kana hunyanzvi kuita ine simba inobhururuka chaiyo. Kudhinda kwedhijitari kunoitwa kuti uve nechokwadi chekuti mifananidzo yakaoma uye mavara anogona kunyatsodhindwa zvine resolution yepamusoro. Yedu yepamhepo pole mireza inokodzera chero chinhu chekusimudzira chiitiko uye inokubatsira iwe kutora pakarepo kufunga kubva kune vako vanogona vatengi mukati memaminitsi!
Masikisi Akasiyana siyana uye Maumbirwo eSarudzo Dzako
Kupa zvirinani zvakagadziridzwa ruzivo kune vatengi vedu, CFM inopa dzakasiyana tsika tsika uye maumbirwo etsika kusangana ako maratidziro. Saizi akaenzana anosanganisira 2 'x 3', 3 'x 5', 4 'x 6', 5 'x 8', 6 'x 10', uye saizi yemhando, se60 x 90cm, 150 x 90cm, 90 x 180cm, 1m x 2m, nezvimwewo .. zviripo.
Tsika Mureza Pole